တရား နှင့် ဓား | မိုးချိုသင်း မှတ်တမ်း
Thanksalot for ur father poem.I appreciate u n ur father.I shall hold the chop for them!May you be free from all sufferings!Ever smile,never die!
လူလိုမသိတဲ့လူတွေကို လူတွေလိုပြောရင်လည်း နားလည်မယ်မထင်ပါဘူး အမရယ်...
Pe Thu Aung said...
ဒါ ခံစားချက် အမှန်ပါပဲ... မအယ်ရေးတဲ့ ဘလာဘလာယဉ်ကျေးမှုမှာ မန့်ခဲ့သလိုပဲ သူကြီးကို စစ်တုရင်ခုံနဲ့ ခေါင်းကို ရိုက်ခွဲရမှာပဲ...
သူများထက်အသာစီးက နေချင်တာကလဲ လူ့ သဘာဝ...
မချိုသင်းတို့သားအဖပြောတဲ့ တော်လှန်ရေးသမားဆိုတာလဲ တစ်နေရာရာမှာ ရှိနေတာပါပဲ...
ဘာပြောရမှန်း စဉ်းစားမရလို့ ကဗျာလေး ကူးပြီး ဓားကို ဆုပ်ရင်း ပြန်သွားပါတယ်...
“စကားမရှုပ် မတရား မလုပ်ပေမဲ့
ဟုတ်ပါတယ်အစ်မ...ဆရာကြီး ပြောသလို ဓားကိုတော့ ဆုပ်ထားရဦးမှာပါပဲ...။
အမရေ ကျွန်တော်ကတော့ “တူရာတန်ရာ” ဆိုတဲ့စကားကို သတိရမိတယ်....။
ဒီကောင်တွေအတွက် တရားတွေဟောနေရင် ဒါကျွန်တော်တို့ တတွေ အချိန်ဆွဲနေတာပဲ ဖြစ်မယ်..။
အစေခံ တပ်သားလည်း မလိုချင်ဘူး
ခွေးပစ်တဲ့ တုတ်ဖြစ်နေတဲ့ စစ်သားတွေ အဖြစ်ကိုစိတ်မကောင်းလို့ 
ရင်ကွဲနာကျနေတဲ့ ပြည်သူတွေ အတွက်
အမှန်အကန် တော်လှန်မဲ့ ပြည်သူ့ တပ်မတော်ပဲ လိုချင်တယ်။
ခေါင်းစီးစာသားလေးကို ကြိုက်မိသလို ဒီကဗျာလေးလည်း ကြိုက်တာပဲ။
ကဗျာ တစ်ပိုစ်စီတိုင်းအားရှိလှပါတယ် အမရေ
ကျနော့်မှာချစ်စရာ ဒီအကို ဒီအမတွေကိုပဲ
မျက်စိပိတ်ပြီးယူပါတော့မယ် အချက်(၇)ချက်နဲ့ကိုက်ရင်ပေါ့လေ အဟီးးးး
မမ လဲ မအားတဲ့ ကြားက တပုဒ်ရေးနေမိတယ်
I am just considering the meaning of "Man", "Solider", "Hero" and "Sacrifice". Whatashameful make-up story?
During these days, I am not so fine with anger and hateness.
တရားကိုပစ်၊ ဓါးကိုလှစ်၊ စစ်ကိုငါတို့ ချစ်ကြစို့ ။ KM
ချိုသင်းကော့မန့် ကြောင့် လိုက်လာတာ။
အခုတလောတော့ မဟော်သဓာကို ချောက်ချခံရတဲ့ အခန်းကိုပဲ ခေါင်းထဲရောက်နေတာပဲ ချိုသင်းရေ..
ဆရာကြီးကဗျာလေးကို ဖတ်ပြီး ဓားပဲ ဆုပ်လိုက်ရတော့မလားပဲ...
ဒီကဗျာလေးကို ဖတ်ပြီး ရင်ထဲ ထိထိခိုက်ခိုက်
ဆရာသာ ခုနေရှိရင် အဲလို ကဗျာမျိုး ထပ်ထွက်လာဦးမှာ ထင်ပါရဲ့။
နောက်ထပ် နှစ်ပေါင်းများစွာ အတွက်
ဓါးကိုတော့ ဆုပ်ထားရအုံးမယ် ဆိုတာ အမှန်ပဲဗျာ။
“တရားနှင့်ဓား၊ အားနှစ်အားတွင်၊ တရားကိုသယ်၊ ဓားကိုလွယ်၍၊ မကောင်းသူပယ်၊ ကောင်းသူကယ်အံ့" လို့ ဖြစ်သင့်တာပေါ့။
ကဗျာဆရာက သူပြောချင်တာကို လှပစွာပြောတတ်
ပေမဲ့ ကျမကတော့ ကဗျာမဖွဲ့ တတ်လို့ ရင်ထဲမှာပဲ
တကယ်ပဲ..စောင့်ရတာ ကြာတယ်..စစ်ကို မုန်းပေမယ့်..ခုတော့ ကိုယ်တိုင်ပါဝင်တိုက် လိုက်ချင်ပါပြီ ... အစ်မရယ်
ဆရာကြီးဦးတင်မိုးရေးခဲ့တဲ့ ဒီကဗျာထက်ပိုပြီး ပြင်းထန်တဲ့ကဗျာတပုဒ် ရှိပါသေးတယ်။ ကဗျာက အပိုဒ်တိုလေးတွေချည်းပါဝင်ပြီး ဗုံး ဗုံး ဗုံး ဗုံးနဲ့ဗုံးချင်းထပ်နေအောင် သုံးထားတဲ့ကဗျာတပုဒ်ပါ။ ဆရာကြီး အဲဒီကဗျာလေးကို ဘယ်အချိန်မှာ ဘယ်လိုခံစားပြီး ရေးဖွဲ့ ခဲ့တယ်မသိ။ ဖတ်မိပြီး သိပ်နု သိပ်အေးချမ်းတဲ့ ကဗျာဆရာကြီးတယောက် ဒီလိုကဗျာမျိုးတွေ ရေးဖွဲ့ ဖြစ်လောက်အောင် ဘယ်လိုခံစားခဲ့ရတယ်ဆိုတာ သိရအောင် အဲဒီကဗျာလေးကို တွေ့ ရင် ဆရာမ ပြန်တင်ပေးစေချင်ပါတယ်။
အဲဒီလို ကဗျာမျိုးတွေ ထွက်ပေါ်လာရတာဟာ ခုလိုမျိုးခံပြင်းမှု ဒေါသ ဘ၀တွေကြောင့် မဟုတ်ပါလားဗျာ။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ချစ်တယ်ဆိုရင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ လမ်းစဉ်ကို မှန်မှန်ကန်ကန် မြဲမြဲမြံမြံ လိုက်နိုင်ကြပါစေ။
နှလုံးသားရဲ့ Threshold ကိုကျော်လွန်သွားတဲ့အခါ….
တရား နဲ့ဓါးကို တဖက်စီကိုင် ပြီး.. လေဘာတီ ရုပ်ကြီးလို ထုထားချင်တယ်။
ပြန်လာပြီနော်.. အမ လာ အော်ထားတာတွေ တွေ့တော့.. တိတ်တိတ်လေး ပျောက်နေတာ..အားတောင်နာသွားတယ်
နေကောင်းလား မချိုသင်း.. Zamba ပြန်သွားကဖြစ်လား...
This is my first time to read ur blog but when i read ur one ,i cannot stop so i read all of ur posts .I like so much .It takes too long to read yet i cannot stop.So nice
ရီအောင်လုပ်တာက မွန်းကြပ်နေတာတွေ ပျောက်စေချင်လို့ ပါ...
ငိုအောင်လုပ်တယ် ဆိုတာကတော့ အဲဒီအထိ မရည်ရွယ်မိခဲ့ပါဘူး...
ညီမလေးကို သွားသတိရတယ်လေ.. ရေးရင်းနဲ့ တောင် ခဏခဏ မျက်ရည်ကျခဲ့ရတယ်...
ထမီလေးဝတ်ထားတဲ့ ငါးတန်းကျောင်းသူ ညီမလေးကို မျက်စိထဲက မထွက်ဘူး
အခုမှ အကြွေးတွေလာဖတ်ဖြစ်တယ်။ သတိထားမိတော့ ဘလော့ခ်က ကဗျာလေး မရှိတော့ဘူး။ အဲ့ဒီကဗျာလေးကို လာဖတ်တိုင်း သဘောကျနေတာပါ။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် အစ်မ ပျော်ပါစေ..။
မာမီစု ကို နအဖ က ဖမ်းဆီးခြင်းအပေါ် ပြည်ပရောက် ရဲရဲတောက် ဖိုးချစ်မျိုးချစ် အဖွဲ.ပေါင်း ၆၅ သန်းက ဆန်.ကျင်ကန်.ကွက် ခဲ.ကြပါတယ်။
ထုံးစံအတိုင်း သံရုံးများရှေ.မှာ အရည်မရ အဖတ်မရ အော်ပီး ပေါကြောင်ကြောင် စတိတ်မန်.ကြီးများ ထုတ်ကြပါမယ်။ တခန်း၇ပ်ပြဇတ်လေး များ ပါဝင်ပါမယ်။
အထူးအစီ အစဉ် အနေနဲ.
အင်းစိန်ထောင် ကို အင်တာနက်ပေါ် ကနေ ၀ိုင်းပါမယ်။။။
နေပြည်တော်ကို ဘလော.တွေ ကနေသိမ်းပါမယ်။။။
မာမီစု ကို ရေဒီယိုတွေ ပေါ်ကနေ ကယ်တင်ကြပါမယ်။။။
သန်းရွှေ နဲ. အပေါင်းပါများကို စိတ်ကူးထဲမှာ ခုံရုံးတင်ပါမယ်။။။
ဒီမိုကရေစီ ကို ခွက်စောင်းခုတ် ပီးဖေါ်ဆောင်ပါမယ်။။။
အော်ကြက် သမ်းတမ်း အနှစ် ၂၀ မြောက် အခမ်းအနားများကို
အူကြောင် ပေါက်ကြောင် ရဲရဲတောက်ကြီးများ ဦးဆောင်ပါမယ်။။။
တနှစ် တခါ နိုဝင်ဘာမှာ မွေးနေ.အခမ်းအနား လုပ်ဖို. တည်ထောင်ထားတဲ.
မဟာကျောင်းသား တပ်မတော်ကြီး က ရွှေနိုင်ငံတော် ကြီးကို ကယ်တင်ပါတော.မဲ.
အကြောင်း မြန်မာပြည်သား သူတော်ကောင်းများကို အကြောင်းကြားအပ်ပါတယ်ခင်ဗျ။။။
Note: got it from forwarded mail.
တချိန်က ဆရာမိုးရဲ့ လုပ်ဖေါ်ကိုင်ဖက်ပါ
“တရားနှင့်ဓား၊ အားနှစ်အားတွင်၊ တရားကိုချစ်၊ ဓားကိုပစ်အံ့၊ စစ်ကို ငါတို့ မုန်းပါသည်”
“စကားမရှုပ် မတရား မလုပ်ပေမဲ့”
လက်တွေညောင်းလာလို့ ....း) )